nampalahelo dia zokiolona 6 monja hatreto no mba nahazo izany ho an’ny faritra Anjanamaitso Ampitatafika. Olona sahirana avokoa anefa ireo mponina ao an-toerana raha ny vaovao azo. 6 monja raba betsaka ireo zokiolona mandray vola fisotroan-dronono fa ny ankoatra izay dia mivelona amin’ny varotra amoron-dalana, mipetraka amin’ny zanany izay mivelona amin’ny asa fanamboarana biriky….Malahelo mafy araka izany ny mponina ary manao antso avo amin’ny Fitondram-panjakana. Nomarihin’ny mpitondra tenin’izy ireo moa fa ny an-tsasaky ny mponina ao Anjanamaitso dia zokiolona avokoa no sady sahirana. Ankoatra ireto farany dia mbola tsy nisy nahazo fanampiana ihany koa ireo mpivarotra amoron-dalana…. araka ny fampanantenana nataon’ny filoham-pirenena.